कार्तिक ०५, २०७३ समय - १५:२२:५७ | 21 Oct, 2016
‘विग्रेड अफ गोर्खाज’ अन्र्तगत दोस्रो गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत वारेन्ट अफिसर कैलाश खेबाङ यतिबेला चर्चामा छन् । यता नेपालमा होइन संसारभरी चर्चा छ उनको । तर, उनको चर्चा कुनै युद्ध मैदानमा अभूतपूर्व विरता देखाएर भने होइन । उनले समाइरहेको बन्दुकको शक्तिको कारण पनि होइन । उनको चर्चा, बन्दुकसँगै उनले समाएको कलमको कारण । योद्धा मोर्चाको रोमाञ्चक अनुभुतीलाई अक्षरमा उतारेरको कारण आज उनी चर्चामा छन् । ‘गुर्खाज’ नामक उनको पुस्तकको कारण उनी चर्चामा छन् ।
ताप्लेजुङमा जन्मेका खेबाङ वि.सं. ०५५ सालमा ‘विग्रेड अफ गोर्खाज’मा भर्ती भए । लाहुरेका युद्ध कथामा अर्धारित जीवन कहानी ‘गुर्खाज’ सन् २०१५ मा बेलायतको विख्यात प्रकाशक लिटल ब्राउनबाट प्रकाशन गरिएको हो । ‘सन्डे टाइम्स’का अनुसार अंग्रेजी भाषामा लेखिएको यो पुस्तक विश्वका १० उत्कृष्ट पुस्तकमा पर्न सफल भएको छ । एसियामा सर्वोकृष्ट बिक्रीको पुस्तक हो । यो पुस्तक अनलाइन बजार अमेजोन डटकमबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ ।
नेपाल बेलायत सम्बन्धको २०० बर्ष अर्थात् गोर्खा भर्ती सुरु भएको २ सय बर्ष पुगेको अवसरमा ‘व्रिगेड अफ गोर्खाज’ अन्तर्गत खेबाङलाई आफनो जीवनका अन्तरंगहरु प्रस्तुत गर्न पहिलो ‘गोर्खाज’को रुपमा छनौट गरिएको थियो । बेलायती बडामहारानीको प्रत्यक्ष स्विकृती र व्रिगेड अफ गोर्खाजको अनुमतीमा उनले यो पुस्तक लेखेका हुन् । पुस्तकका बिषय अफगानिस्तानको गृहयुद्घले आक्रान्त बनाएको जनजीवनको सेरोफेरोमा घुमेको छ ।
जीवनमा झण्डै दुई दशक सैनिक जीवन विताई सकेका खेबाङले सैनिक जिन्दगीको गाँठी कुरा यसरी व्यक्त गरेका की पुस्तक पढिरहदा सबैलाई रोमाञ्चित बनाउँछ । पुस्तकमा समेटिएका संवाद, विम्व, प्रतिकहरुले गोर्खाली सैनिकको युद्घको प्रसंग, गोर्खाहरुको युद्घकथाले गोर्खाली सैनिकहरुको ईतिहासलाई खँदिलो बनाएको छ । नेपाली समाजमा लाहुरे प्रतिको रंगीन सपनालाई एउटा क्यानभासको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनीसँग रोशन मेवाहाङ्गगरेको कुराकानी :
यो किताब मेरो मात्र हैन, हामी हरेक नेपालीको भन्न चाहन्छु । यो पुस्तक मेरो पल्टनका गुरुहरुका आर्षिवाद ठान्दछु । हरेक नेपालीको प्रेम र ‘विग्रेड अफ गोर्खाज’को उदारताबाट उत्पन्न भएको त्रिवेणी खोला हो । यो त्रिवेणी नदि सरल प्रवाहमा बगेको छ । यसमा समेटिएका युद्घका अनुभव र गोर्खाली इतिहास अनन्तसम्म रहिरहने छ । सैनिक पेशामा रहे पनि मलाई अनेकौ क्षेत्रका सफल मानिसलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो । ‘विग्रेड अफ गोर्खाज’काे प्रमुख कार्यलयप्रति म धेरै आभारी छु । अचानकको यो मनोनयनले मलाई ज्यादै खुशी तुल्याएको छ । थप जिम्मेवार महशुस गरेको छु । यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठुलो सफलता ठान्दछु ।
-हामी जे भन्न सक्छौ, त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु नै लेखकको कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ । हामी जे भन्न असमर्थ छौ, त्यो व्यक्त गर्न सक्नु नै लेखकको दायित्व हो जस्तो लाग्छ । पुस्तक लेख्ने सपना राखिरहन्थे । तर कस्तो पुस्तक लेख्ने दिन रात परिकल्पना गरिरहन्थे । अन्ततः गोर्खा सैनिकको बारेमा पुस्तक लेख्ने अन्तिम निर्णय लिए । अवसर पाए । जति बेला म लडाइको मैदानमा उत्रिएको थिए । त्यो मनको रहर र अध्यारो रात भित्र लुकेको मेरो सपना, आज विपना बनेको छ ।
तपाईको गुर्खाज पुस्तकमा खास के छ ?
-गोर्खालीहरुले बेलायती सेनामा काम गर्न थालेको दुई सय बर्ष भएको छ । गोर्खालीहरु यो लामो समयमा गौरवमय इतिहास निर्माण गरिसकेका छन् । दुनियाँमा हामीले गोर्खालीहरुको बेग्लै इतिहास र पहिचान बनाएका छौं । यो गौरवमय इतिहासको एउटा पाटो हो यो पुस्तक । त्यो गौरवमय इतिहासको जगर्नेा पनि हो । यो पुस्तक नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरक हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । गोर्खालीहरुको गौरवमय इतिहासको दस्ताबेज हो पनि हो । गोर्खालीहरुको भावी पुस्ताको लागि उपहार दिन पाउँदा खुसी छु ।
-प्रसिद्ध प्रकाशक लिटल ब्राउन र अवकास कम्पनिले गोर्खा सैनिक आधरीत आत्मकथा खोजिको क्रममा विग्रेड अफ गोर्खाजलाई सम्र्पक गरेका थिए । विग्रेड अफ गोर्खाजका अग्रज अधिकृतहरुको स्विकृती र छनौट प्रक्रियाबाट मनोनित आत्मकथाको उत्कृष्ट पात्रको रुपमा म पर्न गएको हुनाले यो अवसर सम्भव भएको हो । यो पुस्तक प्रकाशन गर्न स्विकृत दिनु हुने विगे्रड अफ गोर्खाजका सम्र्पूण अधिकृतहरु लगायत, सहकर्मी मित्रहरु र लेखन शैली र छपाई सम्म अत्यधिक सहयोग पुर्याउनु हुने गोर्खाज सदस्यहरुप्रति सलाम छ । आफु सैनिक भए पनि जीवनको प्रवाह नगरी ताल झै जमि रहे र त्यो जमेको ताललाई लिटल ब्राउन र अवकास कम्पनीबाट प्रकाशन गरेर तरंग दिने काम गरे । यदि उहाँहरुले तरंगीत नगरिदिएका भए आज यसरी हिम शिखर झै बग्ने थिइँन ।
-लिटल ब्राउन कम्पनीबाट पुस्तक प्रकाशन,अवकास प्रकाशनबाट पेपर व्याक, हाचेट कम्पनीबाट अडियो बुक प्रकाशन भएको छ । चर्चित अनलाईन अमाजोन, ईबे, विभिन्न अनलाइन पुस्तक पसल, बेलायतको ख्यातिप्राप्त ग्लोसरी पसल टेस्को, आस्डा, लगायत अन्य ठाउँहरुबाट पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी काठमाण्डौंस्थित रत्न पुस्तक भण्डार र पोखरमा समेत पाउन सकिन्छ । पेपर, किन्डल्र्स र अडियो तिन प्रकारका छन् ।